နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ)တံတားပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ)တံတားပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 24, 2018 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor NewsNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒလမြို့နယ် မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး (ဒလ) တံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းဧရိယာ၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး (ဒလ) တံတားပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ပြီး မင်္ဂလာပိုင်တိုင်ကို စက်ခလုတ်နှိပ်၍ စိုက်ထူပေးသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ) တံတား ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် အခမ်းအနား ကျင်းပမည့် ဒလမြို့နယ်ဆိပ်ကမ်းသို့ နံနက် ၈ နာရီ ၁၀မိနစ်တွင် ရေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ ဒေသခံပြည်သူများက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မြန်မာ – ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ) တံတားပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
အခမ်းအနားတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော် က မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး (ဒလ) တံတားစီမံကိန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ တံတားအမျိုးအစားနှင့် တံတားတည်ဆောက်သည့်အတွက် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ၀ါရင့်စီးပွားရေးအကြံပေးနှင့် Presidential Committee On New Southern Policy ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Kim Hyun Chul က မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဦးဟန်ဇော် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစိန်မြအေး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ထွေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang Hwa တို့က သတ်မှတ်နေရာများတွင် ပန္နက်တော်တင်ပေးကြပြီး တွင်းတော် ၀န်းပေးကြသည်။
ယင်းနောက် မင်္ဂလာအချိန်တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ၀ါရင့်စီးပွားရေးအကြံပေးနှင့် Presidential Committee On New Southern Policy ဥက္ကဋ္ဌတို့က မြန်မာ – ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ) မင်္ဂလာပိုင်တိုင်ကို စက်ခလုတ်နှိပ်၍ ပန္နက်တော်တင်ပေးကြပြီး အမွှေးနံ့သာရည်ဖြင့် ပက်ဖျန်းပေးကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၊ လွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ၀ါရင့်စီးပွားရေးအကြံပေးနှင့် Presidential Committee On New Southern Policy ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang Hwa တို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများနှင့်လည်းကောင်း စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တံတားပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများအား ရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံ နှုတ်ဆက်ပြီး ဒလဘက်ကမ်းမှ တံတားတည်ဆောက်မည့်နေရာကို ကြည့်ရှုသည်။
မြန်မာ – ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး(ဒလ) တံတားအမျိုးအစားမှာ ကြိုးဆိုင်းတံတား (Cable Stayed Bridge)ဖြစ်ပြီး တံတားအရှည် ၆၁၄၄ ပေ၊ ရေလမ်းကင်းလွတ်အမြင့် ပေ ၁၆၀ ဖြစ်ကာ ယာဉ်တစ်စီးချင်း ခံနိုင်ဝန် ၇၅ တန်ရှိသည့် လေးလမ်းသွားတံတား ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ တံတားကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃ သန်းနှင့် မြန်မာအစိုးရ ထည့်ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ဒသမ ၃၄၁ သန်းဖြင့် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တံတားတည်ဆောက်ပြီးစီးပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒလမြို့နယ် ၊ တွံတေး မြို့နယ်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်နှင့် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တို့မှတစ်ဆင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့သို့ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အဆိုပါဒေသများ၏ ကုန်စည်ကူးလူး ဆက်ဆံမှုများ ပိုမိုသွက်လက်မြန်ဆန်စွာ စီးဆင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ အနောက်ခြမ်း ဒေသများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှာလည်း ဆူကြုံနိမ့်မြင့် ကွာဟမှုများ ပိုမိုနည်းပါးသွားမည် ဖြစ်သည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဦးဝင်းခိုင်နှင့် ဦးဟန်ဇော်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်လင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၏ ၀ါရင့်စီးပွားရေးအကြံပေးနှင့် Presidential Committee On New Southern Policy ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Kim Hyun Chul ၊ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့် သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ တံတားစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ကြမည့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မွနျမာ-ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး(ဒလ)တံတား ပန်နကျတျောတငျ
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ယနေ့ နံနကျ ၈ နာရီခှဲတှငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ဒလမွို့နယျ မွနျမာ-ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး (ဒလ) တံတား တညျဆောကျရေး စီမံကိနျးဧရိယာ၌ ကငျြးပသညျ့ မွနျမာ-ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး (ဒလ) တံတားပန်နကျတျောတငျ မင်ျဂလာအခမျးအနားသို့ တကျရောကျပွီး မင်ျဂလာပိုငျတိုငျကို စကျခလုတျနှိပျ၍ စိုကျထူပေးသညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ မွနျမာ-ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး(ဒလ) တံတား ပန်နကျတျောတငျ မင်ျဂလာအခမျးအနားသို့ တကျရောကျရနျ အခမျးအနား ကငျြးပမညျ့ ဒလမွို့နယျဆိပျကမျးသို့ နံနကျ ၈ နာရီ ၁ဝမိနဈတှငျ ရယောဉျဖွငျ့ ရောကျရှိလာရာ ဒသေခံပွညျသူမြားက သောငျးသောငျးဖွဖွ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ မွနျမာ – ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး(ဒလ) တံတားပန်နကျတျောတငျ မင်ျဂလာအခမျးအနားသို့ တကျရောကျသညျ။
အခမျးအနားတှငျ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဟနျဇျော က မွနျမာ-ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး (ဒလ) တံတားစီမံကိနျးဖွဈပျေါလာပုံ၊ တံတားအမြိုးအစားနှငျ့ တံတားတညျဆောကျသညျ့အတှကျ ရရှိလာမညျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ နှုတျခှနျးဆကျစကား ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ ဝါရငျ့စီးပှားရေးအကွံပေးနှငျ့ Presidential Committee On New Southern Policy ဥက်ကဋ်ဌ Mr. Kim Hyun Chul က မွနျမာနိုငျငံ၏ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးနှငျ့ အခွခေံအဆောကျအအုံမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစရေေး အတှကျ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ကြျောဆှေ၊ ဦးသနျ့စငျမောငျ၊ ဦးဟနျဇျော ၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာစိနျမွအေး၊ အမြိုးသားလှတျတျော ပွညျတှငျး၊ ပွညျပအလုပျသမားဆိုငျရာကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးကြျောထှေးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Lee Sang Hwa တို့က သတျမှတျနရောမြားတှငျ ပန်နကျတျောတငျပေးကွပွီး တှငျးတျော ဝနျးပေးကွသညျ။
ယငျးနောကျ မင်ျဂလာအခြိနျတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ ဝါရငျ့စီးပှားရေးအကွံပေးနှငျ့ Presidential Committee On New Southern Policy ဥက်ကဋ်ဌတို့က မွနျမာ – ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး(ဒလ) မင်ျဂလာပိုငျတိုငျကို စကျခလုတျနှိပျ၍ ပန်နကျတျောတငျပေးကွပွီး အမှေးနံ့သာရညျဖွငျ့ ပကျဖနျြးပေးကွသညျ။
ဆကျလကျ၍ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြား၊ တိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ၊ လှတျတျောကျောမတီဥက်ကဋ်ဌမြား၊ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ ဝါရငျ့စီးပှားရေးအကွံပေးနှငျ့ Presidential Committee On New Southern Policy ဥက်ကဋ်ဌ၊ ကိုရီးယားနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Lee Sang Hwa တို့နှငျ့ လညျးကောငျး၊ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာနမှ ဝနျထမျးမြားနှငျ့လညျးကောငျး စုပေါငျးမှတျတမျးတငျ ဓာတျပုံရိုကျသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ တံတားပန်နကျတျောတငျ မင်ျဂလာ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျလာကွသူမြားအား ရငျးရငျးနှီးနှီးလိုကျလံ နှုတျဆကျပွီး ဒလဘကျကမျးမှ တံတားတညျဆောကျမညျ့နရောကို ကွညျ့ရှုသညျ။
မွနျမာ – ကိုရီးယား ခဈြကွညျရေး(ဒလ) တံတားအမြိုးအစားမှာ ကွိုးဆိုငျးတံတား (Cable Stayed Bridge)ဖွဈပွီး တံတားအရှညျ ၆၁၄၄ ပေ၊ ရလေမျးကငျးလှတျအမွငျ့ ပေ ၁၆ဝ ဖွဈကာ ယာဉျတဈစီးခငျြး ခံနိုငျဝနျ ၇၅ တနျရှိသညျ့ လေးလမျးသှားတံတား ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
အဆိုပါ တံတားကို ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးမှု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ရနျပုံငှေ ခြေးငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃ သနျးနှငျ့ မွနျမာအစိုးရ ထညျ့ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၃ဝ ဒသမ ၃၄၁ သနျးဖွငျ့ တညျဆောကျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
တံတားတညျဆောကျပွီးစီးပါက ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ဒလမွို့နယျ ၊ တှံတေး မွို့နယျ၊ ကော့မှူးမွို့နယျနှငျ့ ကှမျးခွံကုနျးမွို့နယျတို့မှတဈဆငျ့ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတို့သို့ လှယျကူလငျြမွနျစှာ ဆကျသှယျသှားလာနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ထို့ပွငျ စီးပှားရေးမွို့တျော ရနျကုနျမွို့နှငျ့ အဆိုပါဒသေမြား၏ ကုနျစညျကူးလူး ဆကျဆံမှုမြား ပိုမိုသှကျလကျမွနျဆနျစှာ စီးဆငျးနိုငျမညျဖွဈပွီး ရနျကုနျမွို့ အနောကျခွမျး ဒသေမြား၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမြားမှာလညျး ဆူကွုံနိမျ့မွငျ့ ကှာဟမှုမြား ပိုမိုနညျးပါးသှားမညျ ဖွဈသညျ။
အခမျးအနားသို့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ကြျောဆှေ၊ ဒေါကျတာဖမွေငျ့၊ ဦးမငျးသူ၊ ဦးသနျ့စငျမောငျ၊ ဦးဝငျးခိုငျနှငျ့ ဦးဟနျဇျော၊ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ၊ လှတျတျောရေးရာကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌမြား၊ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးကြျောလငျး၊ တိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးမြား၊ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြား၊ ဌာနဆိုငျရာ အကွီးအကဲမြား၊ ကိုရီးယား သမ်မတနိုငျငံ၏ဝါရငျ့စီးပှားရေးအကွံပေးနှငျ့ Presidential Committee On New Southern Policy ဥက်ကဋ်ဌ Mr. Kim Hyun Chul ၊ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့ သံရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ တံတားစီမံကိနျးတှငျ ပါဝငျကွမညျ့ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြား တကျရောကျကွသညျ။